Indawo yaseBraden - I-Airbnb
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguCindy
Ifakwe kwicala elingasentla kwesikwere seChariton. Iifestile ezinkulu ezijonge kwicala lenkundla. Ukukhanya kunye ne-airy decor. Indawo yokutyela ye-Iron Horse ngesidlo sasemini okanye sangokuhlwa kunye nendawo yethu yokutyela yaseMexico enobuhlobo kunye nevenkile yekofu yePorch, kunye nezinye ezininzi kumgama wokuhamba. Ithiyetha ye-Vision II ikwiibhloko ezi-3 kuphela kunye neemuvi eziqhutywa okokuqala. Ikhubalo laseMazantsi e-Iowa likungqongile kolu lungiselelo lwembali lunyulu. Yiba lundwendwe lwethu eBraden Place.
Esi sisakhiwo esidala sezitena phezu kweofisi yethu yeshishini. Siyenzile kwakhona ngokupheleleyo, kwaye silungele iindwendwe zethu. Ukuhamba umgama ukuya kwiindawo zokutyela, indawo yemidlalo yeqonga, iivenkile zekofu kunye neecawe. Isakhiwo esincinci sezitena esinobuninzi bomtsalane.
Esidala, isikwere sedolophu esinomtsalane. Iitshokholethi zePipers zithunyelwa kwihlabathi liphela kwaye zenza ezona zipho zibalaseleyo. (Thatha isangweji entsha yedeli ngelixa ulapho). Ukuphila ngokulula kwaye kulula usuku, iveki okanye ngaphezulu. Indawo yokutyela ye-Iron Horse kunye nebar yentwana yencasa yembali. Ikhuselekile kwaye yabucala.
I-ofisi yethu ye-Inshurensi ingezantsi, ngoko singumyalezo kude, ukuba kuyimfuneko. Sifuna ukuhlala kwakho kugqibelele.